”सगरमाथा आरोहणलाई ‘स्पेसलाइज्ड’ गर्नुपर्छ” | .:: Welcome || Paryatannews
Home » :: हाईलाइट समाचार » ”सगरमाथा आरोहणलाई ‘स्पेसलाइज्ड’ गर्नुपर्छ”
”सगरमाथा आरोहणलाई ‘स्पेसलाइज्ड’ गर्नुपर्छ”
आठ हजार पर्वतारोही शिखरमा पुग्दा २८६ को मृत्यु
काठमाडौं । सगरमाथाको चुचुरोमा मौसम र आरोही समूहको तालमेल थिएन, तैपनि आरोहीको भीड उत्तिकै थियो । वसन्त ऋतुको यो यामसँगै बाह्र पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने कीर्तिमानी आरोही फुर्वा तेन्जिङ शेर्पा केही हतास भए, जतिखेर उनी क्याम्प ३ बाट ‘समिट’ का लागि अघि बढ्दै थिए । मे २३ तारिखका दिन क्याम्प ३ बाट माथि वेगले हावा चलेको थियो । क्याम्पमा बढी हावा चल्दा पाल टाँग्न समस्या हुन्छ । अक्सिजन लिन पनि गाह्रो हुन्छ । हिउँ उडाएर भिजाउने र त्यसले हातखुट्टा चाँडो खाने गर्छ । तर पनि प्रतिकूल मौसमको पर्वाह नगरी साहसी आरोही शेर्पा शिखर चुम्न चुचुरोतर्फ लागे ।
सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आरोहीले आरोहणका लागि अनुमति लिएका थिए । आरोहणका लागि सगरमाथामा भीड लागे पनि मौसमले साथ नदिँदा केही आरोही खिन्न हुँदै फर्किए । यसपटक सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी गरी ८४० जनाले अनुमति लिएकामा ६३५ जनाले सफल आरोहण गरेका छन् । यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ४२ वटा आरोहण दलले सगरमाथा आरोहण अनुमति लिएका थिए। यसअघि सन् २०१३ मा करिव पाँच सय र सन् २०१६ मा ४५१ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए ।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)का अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले सगरमाथा आरोहणका लागि यो वर्ष धेरै आरोही आएको भएपनि मौसमले साथ नदिँदा थोरै आरोही सगरमाथाको चुचुरो नपुगी फर्कन बाध्य भएको बताउनुभयो । “यो वर्षको वसन्त ऋतु अनौठो भयो, मौसमी सूचना अनुसार हावा चल्ने, चिसो हुने भनेको दिन मौसम राम्रो भइदिने तर हावा चल्दैन, चिसो हुँदैन भनेको दिन चाहिँ वेगले हावा चल्ने हिउँ पर्ने भयो, यसले गर्दा कतिपय आरोही फिर्ता आउनुप¥यो” – उहाँले भन्नुभयो ।
“अनुभवी आरोहीलाई मात्र चढ्न दिनुपर्यो, सगरमाथा आरोहणलाई ‘स्पेसलाइज्ड’ गर्नुपर्छ, पैसाको लोभमा सगरमाथालाई सस्तो बनाउनु भएन,” आरोही शेर्पाले भन्नुभयो – “सम्बन्धित निकायले त्यहाँ बढेको भीड र फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराई समग्रमा यो वर्षको आरोहण उत्साहजनक रहेको बताउनुहुन्छ । आरोहणलाई व्यवस्थित बनाउन आरोही, पर्यटक पथप्रदर्शक, सरकारी सम्पर्क अधिकृत र आरोहण एजेन्सीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । सम्पर्क अधिकृतबारे धेरै गुनासा विभागमा आएको महानिर्देशक भट्टराई स्वीकार्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ – “यो समस्याको समाधान खोज्न विभाग लागिपरेको छ ।”
”सगरमाथा आरोहणलाई ‘स्पेसलाइज्ड’ गर्नुपर्छ” Reviewed by Shiva Shrestha on Jun 27 . काठमाडौं । सगरमाथाको चुचुरोमा मौसम र आरोही समूहको तालमेल थिएन, तैपनि आरोहीको भीड उत्तिकै थियो । वसन्त ऋतुको यो यामसँगै बाह्र पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने कीर्त काठमाडौं । सगरमाथाको चुचुरोमा मौसम र आरोही समूहको तालमेल थिएन, तैपनि आरोहीको भीड उत्तिकै थियो । वसन्त ऋतुको यो यामसँगै बाह्र पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने कीर्त Rating: 0